Kurwiswa kunoshamisa kuHawaii neChina neRussia, mhirizhonga muEswatini ingadai yakaita kuti Taiwan inyorwe pairi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Kurwiswa kunoshamisa kuHawaii neChina neRussia, mhirizhonga muEswatini ingadai yakaita kuti Taiwan inyorwe pairi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • Taiwan Kupwanya Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Russia China Nuclear hurukuro
Kutaura kweChina pamusoro peTaiwan kunoratidzika kuva kutyisidzira kwepasirese. Mauto anodzidzira mamaira mazana maviri kubva kumahombekombe eHawaii, mukuru weJapan anoyambira US nezvekurwiswa neChina neRussia, kuyedza kupidigura hurumende muHumambo hweEswatini, inogona kunge iine hukama.
Hawaii iri kutyisidzirwa nekukwanisa kushamisika kurwisa neRussia neChina pamusoro peTaiwan?
Humambo hweEswatini huri mumhirizhonga mushure mekunge mhomho yevatorwa vekunze iri kuyedza kupidigura humambo. Izvi zvakare zvinogona kunge zvine chekuita neChina- Taiwan kunetsana
IUS yakachengetedza hukama hwehukama uye yakapa zvombo zvekubatsira Taiwan. Eswatini ndiyo chete nyika yeAfrica ine hukama hwehukama kuTaiwan. Hazvishamise kuti US yakavaka mumiriri muhombe muhumambo hushoma hwevanhu vasingasvike mamirioni maviri.
Mavhiki maviri chete apfuura US Raptor Fighter Jets aifanira kusimuka kudzora chiitiko cheRussia mumvura dziri padyo neUS Pacific State yeHawaii.
"Tinofanira kuratidza kuzvidzora kuChina, uye kwete China chete asiwo maRussia, nekuti, sekukuudza kwandakaita, kuti vari kuita maekisesaizi pamwe chete," mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kweJapan Yasuhide Nakayama tyekare Hudson Institute vhiki ino.
Kana iwe ukatarisa nhau kubva kuZvezda, inova mushumo weRussia, nhau dzinobva kumauto eRussia, ivo vari kunyatsorovedza izvozvi pamberi paHonolulu.
Uye kune zvikepe zvehondo, zvombo zvenyukireya uye ndege hombe. Uye ivo vari kunyatso kudzidzira chaizvo pamberi chaipo pekumadokero kwechikamu cheHonolulu.
Ini handidi kuyeuchidza makore makumi manomwe apfuura Pearl Harbor yakarwiswa nekushamisika. Isu tinofanirwa kuve nekuchenjerera kwakadai kwekudzidzisa kwemauto mamishini nemaRussia.
Haisi tsaona, maRussia akasarudza nzvimbo, yekumadokero kweHonolulu, Hawaii. MuHawaii, kune yechinomwe US ​​zvikepe uye zvakare PACOM inotungamirwa muHawaii.
Ngarava yekuRussia inosungirirwa yakanamatira kuchamhembe kweOahu, Hawaii, maererano neshumo neichi chinyorwa.
White House, hurumende yeUnited States yakaitawo chirevo nezveHong Kong.
Kunetseka kweTaiwan kunopinda nechisimba kubva kuinland China kwave kutora pfungwa kwevaIdo-Pacific masayendisiti mumwedzi ichangopfuura, sezvo maCommunist mauto eChina achiwedzera zvidzitiro zvavo zvemauto zvakakomberedza chitsuwa ichi. Nakayama, aitaura zviri pachena pamusoro pekuda kwenyika dzine hutongi hwegutsaruzhinji kuti ave nechokwadi chekurarama kweTaiwan, akataura kuti Russia neChina vari kushanda sevabatsiri vari kugadzirira gakava guru neUnited States.
VaTaiwanese vakanyatsonaka. "Vari kutarisa nyika mbiri dzakabatana uye [kutaridza] kutyisidzira kukuru kuTaiwan."
Vakuru veCommunist veChinese vanoona Taiwan senyika yakatsauka, iyo yavakati kubvira vatanga kutonga muna 1949 asi vasina kumbobata ushe. Nyika zhinji dzinoziva hutongi hweBeijing sehurumende yeChina uye hadzina hukama hwekudyidzana neTaiwan, kunyangwe iyo US yakachengetedza hukama hweshamwari uye yakapa zvombo zvekubatsira zviremera zveTaiwan kuti zvidzivirire kupinda kubva kunharaunda.
"Tinofanirwa kuchengetedza Taiwan senyika inosununguka," Mutevedzeri weGurukota rezvekudzivirirwa muJapan Nakayama.
Ichi chingave chiri chikonzero chaicho chekuti kune rimwe divi repasi, mune diki Humambo hweEswatini hune vanhu vane mamirioni 1.3, iyo US ine imwe yemamiriri makuru munyika.
Eswatini ndiyo chete nyika muAfrica ichiziva Taiwan senyika. United States inoita kunge ine hanya nemamiriro ezvinhu aya. China yakatsamwa uye pamwe iri shure kwekusagadzikana uye kupidigura kuedza muEswatini. Vaimbova gurukota rinowona nezvekunze kuZIMmbabwe, VaWalter Mzembi vakapa nhoroondo kune eTurboNews kutanga kwesvondo rino mune chinyorwa chakanzi: Eswatini yakabatwa pakati peChina neTaiwan.
Mutauriri weChinese Kunze kwenyika Ministry Wang Wenbine akatsanangura chirevo cheJapan nezvekurwiswa kweHawaii sekukuvadza zvakanyanya uye zvakagumbuka muJapan kudaidza Taiwan nyika. Akati: "Tinokumbira Japan kuti ijekese sekristaro kuti Taiwan haisi nyika, uye tione kuti zvinhu zvakadaro hazviitike zvakare."
Nakayama akasimbisa kuti kunetsekana mudunhu reIndo-Pacific kune chekuita nekuchengeteka kweAmerica, kunyanya muchiedza chekubatana pakati peChina neRussia. Akafambisa pfungwa iyi nekuyeuchidza nezvekurwiswa kweJapan kushamisika paPearl Harbor makore 70 apfuura, izvo zvakakonzera kupindira kwemauto eUS muPiri Hondo Yenyika.
Vakuru veRussia vakatsanangura yavo "missile uye artillery firings" muPacific semuchina wekutarisa. Kuna Nakayama, mashandiro akadaro anojekesa kuti Japan neUS zvine dambudziko rakafanana rinoda kumiswa pamwe chete.
Vatungamiriri veUS neJapan vanoti vachasimbisa maturusi avo kurwisa kutyisidzirwa kubva kuChina neNorth Korea, kusanganisira kumanikidza kweBeijing kuenda kuTaiwan, sezvo hutungamiriri hweBiden huchiedza kuvapo munzvimbo iyi.